Yazvino yekuvandudza yeiyo Twitter app, inobvisa iko kunyorera kweApple Watch | IPhone nhau
Mangwanani ano takamuka kune nhau dzekuwedzeredzwa kweiyo Twitter hunhu muganho kusvika mazana maviri negumi, chiwedzero icho chiripo parizvino muboka rakavharwa revashandisi, asi kuti isu tinokwanisa kumisikidza kuburikidza nekuwedzera mubrowser yedu. Iyo imwe nhau iyo iyo shiri kambani inotipa isu ndeye yazvino kugadzirisa yekushandisa kwayo kweIOS, iyo yekuvandudza iyo wabvisa iyo app yeApple Watch, Sezvo isu tichigona kuverenga mune yekunyorera yekuvandudza manotsi, iyo inogadziridza inogadzirisa akasiyana malfunctions uye kugadzirisa matambudziko akasiyana siyana kana uchiisa yakakwira-resolution mifananidzo.
Twitter haina kutaura chikonzero nei yabvisa chikumbiro cheApple Watch, asi zvinofungidzirwa kuti zvichakonzerwa nematambudziko neshanduro yazvino yeWatchOS 4, vhezheni inosvika rinopfuura vhiki iri pamusika. Iyo app yeApple Watch akatitendera kuti tione maTweets achangoburwa revanhu vatinoteedzera mukuwedzera pakuona mafambiro anotakurwa panguva iyoyo.
Sezvo isu tichigona kuverenga mune MacRumors foramu, vashandisi vazhinji vakasangana nematambudziko ekuvhara mukushandisa, mukuwedzera pakuratidza zviziviso izvo zvaisavapo mukushandisa. Kunyangwe abvisa chikumbiro, Twitter iri kuenderera mberi nekupa iwo mapikicha ekushandisa paApple Watch, iyo inosimbisa kuti chikonzero chekubviswa kweapp pachigadzirwa ichi chinongova chenguva pfupi uye hachigadzike, sezvakaitika kare neGoogle Mepu, eBay uye Amazon.
Sezvo nguva yakapfuura, vazhinji vanga vari ivo vagadziri vakaenda kubvisa maapplication eApple Watch nekuda kwekushomeka kwekushandisa pamwe nekushaikwa kweicho chaicho chinhu chavakapa, kunyanya mumamodeli ane akura Hardware senge yekutanga Apple Watch uye Series 1.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Yazvino yekuvandudza yeiyo Twitter app, inobvisa iko kunyorera kweApple Watch
watchOS 4.1 beta inounza yakawanda nhau, tinovaratidza iwe